COVID 19 fotoana iray ahafahan'ny orinasam-pifandraisana telecom lehibe hahazo bebe kokoa-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
COVID 19 fotoana iray ahafahan'ny orinasam-pifandraisana telecom lehibe hitombo lehibe kokoa
FIAINANA: 2020-05-26 HITS: 14
Washington: Ny areti-mifindra Coronavirus dia mety hanaporofo fa tombony ho an'ireo orinasan-teknolojia lehibe, izay raha ny filazan'ny mpandinika ny indostria, dia antenaina fa handeha hiantsena ho an'ny orinasa teknolojia kely kokoa.
Ny tsena henjana kokoa aorian'ny areti-mifindra coronavirus dia hamela safidy vitsy kokoa ho an'ireo orinasa kely mifono vola, ny Wall Street Journal dia nitatitra ny momba ireo mpandinika indostria.
"Ny dikan'izany ho an'ny Chief of Officers dia toa ny vidiny ambony sy ambany noho ny safidiny," hoy i Crawford Del Prete, filohan'ny orinasam-pikarohana teknolojia International Data Corp.
Na dia loza lehibe aza ny Coronavirus dia fanamby lehibe ihany koa izany. Raha orinasa maro no miatrika ny loza ateraky ny famerenana amin'ny laoniny, ny sasany kosa nahita asa vaovao teo afovoan'ny krizy, nanohy namolavola sy nanavao ary nahita ny fombany manokana.
Ningbo Joiwo, orinasa matihanina amin'ny fifandraisan-davitra izay manana traikefa mihoatra ny 15 taona mitarika ny telefaona sy ny rafitra indostrialy, dia nanambara ny famoahana telefaonina porofo mipoaka / tsy misy toetr'andro manome fifandraisana azo antoka sy azo antoka ho an'ny toerana mampidi-doza anaty sy ivelany. Nandritra ny taona maro, vokatra vaovao marobe izay novolavolaina tsena, nahatonga antsika fifaninanana matanjaka raha ampitahaina amin'ny orinasa hafa.
Vahoaka / WhatsApp / WeChat: +8613858200389
Fampidirana ny Joiwo campus kely & fonja & telefaona ampahibemaso voafonja & fonja JWAT145
Fandikana ny tena fiasan'ny fanitarana telefaona vonjy taitra amin'ny vahaolana amin'ny lalam-pirenena